Guddoomiye Gobol oo sheegay in qofkii la heshiiya Al-Shabaab ay tooganayaan - Awdinle Online
Guddoomiye Gobol oo sheegay in qofkii la heshiiya Al-Shabaab ay tooganayaan
Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare Guddoomiyaha Gobolka Mudug dhanka Puntland oo ka hadlay Xaaladda amni ee Gobolkaas ayaa u digay shaqsiyaadka taga deegaannada ay maamulaan Al-Shabaab.
Dabac maamul ayuu ku eedeeyay maamulkii ka horeeyay oo aan ciqaabin Odoyaashii looga yeeray Deegaannada Al-Shabaab gacantooda ku jirta ee dib ugu laabtay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee DG Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare Waxa uu sheegay in maamulkiisu gacan adag ku qaban doono shaqsiyaadka la shaqeeya Al-Shabaab ee ku dhex nool Gobolka.
Waxa uu ku hanjabay in la toogan doono ciddii u tagta Al-Shabaab ee Dib ugu laabato Deegaannada maamulkaas iyada oo aan la xirin, sababta waxa uu ku tilmaamay in dadka looga reebayo arrintaas.
“Haddii aan maamulka hayn lahaa markii Odoyaasha ay u tageen Al-Shabaab, dhammaan waan toogan lahaa, balse maamulkii naga horeeyay ayaa ka dhigay dad aan dambi lahayn, hadda waa ay nala dhaqmaan, waana aqiyaar aan wadashaqeyno” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Gobolka Mudug dhanka Puntland.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Waxa aan u sheegayaa in qoladii u tagta Al-Shabaab ee dib noogu soo laabato waan tooganeynaa oo xitaa xirineymo, ciddii rabta in Shabaab lala heshiiyo ha inoo keento innaga ayaa la heshiineyno, waan la doodeynaa, haddii ay xukunka rabaan way qabanayaan, haddii ay dhaqaale rabaan waan siineynaa, balse haddii ay heshiis la galeen ha inoo keenaan isaga oo qoran”.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka DG Puntland ayaa dhowr jeer digniin u diray Ganacsatada, Odoyaasha dhaqanka & dadka Gobolkaas in ay xiriir la wadaagaan oo ay u tagaan Al-Shabab.
Previous articleXukuumadda Soomaaliya oo beenisay War kasoo yeeray Xasan Cali Kheyre
Next articleGuddoomiyeyaasha labada Aqal oo gaaray Magaalada Garoowe